Fampandrosoana : Hitokana fotodrafitrasa maromaro any Antsiranana ny Filoha -
AccueilRaharaham-pirenenaFampandrosoana : Hitokana fotodrafitrasa maromaro any Antsiranana ny Filoha
Mitohy ny asa. Raha mbola miezaka ny mitady hevitra hanakorontanana ny mpanohitra, manohy hatrany ny asa fampandrosoana ny fitondram-panjakana ary ao anatin’izany ny fifandraisana amin’ny sehatra iraisam-pirenena sy ny fijerena ny zava-misy any amin’ny Faritra. Mandray anjara amin’ilay fifanakalozan-kevitra ara-politika eo amin’ny Madagasikara sy ny Vondrona Eoropeana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, ary omaly izy no tonga any Antsiranana, toerana hanaovana ny fihaonana. Nitsena azy teny am-pahatongavana ny Praiminisitra Mahafaly Olivier Solonandrasana, ireo mpikambana ao amin’ny governemanta, ireo olom-boafidy ary ny mpitondra any an-toerana.
Ankoatra io fihaonana io, handray anjara amin’ny fivoriana ra-toekaren’ny faritra Diana ihany koa izy. Ho fanaporofoana fa miasa ny fitondrana, fotodrafitrasa maromaro ihany koa mandritra izao diany izao no ho tokanan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, ao anatin’izany ny fihaonan-dalana antsoina hoe « Y », ny toeram-pitsaboana ny reny sy ny zaza ao amin’ny hopitaly miaramila ao Antsiranana. Toa izany koa ny orinasa « Pêche et Froid de l’Océan Indien ».
Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoanan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa amin’izao fandalovany any Antsiranana izao ny fametrahana fehezam-boninkazo eo amin’ny fasan’ireo miaramila anglisy na ny « Commonwealth War Cimetary »